ỌHANEZE NDI IGBO AKATỌỌLA OGBUGBU AHỤ EGBURU NDI ỤKỌCHUKWU NA STEETI BENUE – hoo!haa!!
Otu kacha elu, n’ala Igbo bụ Ọhaneze ndi Igbo agbarụala ihu katọọ ogbugbu ahụ egburu ndi ụkọchukwu ụka Katọlik nabọ nakwa mmadụ iri na asaa ndi ọzọ bịara ụka na steeti Benue. Ọhaneze sịrị na ogbugbua ndi akpọrọ ndi nchị ehi gburu ndia enweghị atụ n’ala anyịa ma bụrụkwa nnukwu ihe mgbawa obi
N’otu aka ahụkwa, ndi otu ahụ na-agba mbọ maka Biafra inwere onwe ya bụ Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra MASSOB n’aha nkenke, katọkwara ozi iti aka n’obi nke onye isi ala bụ Buhari zigara ndi state Benue maka ogbugbua egburu ndi ụka. MASSOB sịrị na ozi iti aka n’obia bụ emu ka onye isi ala na-akwa ndi ụka Kraist.
Anyị ga-echeta n’ọbụ na ụlọ ụka St. Ignatius dị n’Ukpor-Mbalom, n’okpuru ọchịchị ime obodo ọwụwa-anyanwụ Gwer nke steeti Benue ka anọrọ mee arụa. Ekwukwara na ọbụ ndi ụkọchukwu, Joseph Gor nakwa Felix Tyolaha ka-egburu tinyekwara mmadụ iri na asaa ndi ọzọ mgbe ha nọ n’ụka ofufe nru.
Onye isi Ọhaneze ndi Igbo bụ ichie Nnia Nwodo nọrọ n’Enugu n’ ụbọchị Tusdee gara aga; n’ogbakọ ndi isi otua nwere kwue n’ọbụ ihe ekwesighị ịkpụ n’uche na mmadụ ga-awakpo ndi na-ekpere Chukwu ma gbue ha ka ana-egbu anụmanụ. Ọ sịrị na ọdịkwa ọjọọ na ndi ọchịchị emedighị ntị ka ha mara na ụdị ihea mere.
N’okwu ya, ichie Nwodo sịrị na ogbugbua egburu ndi ụkọchukwua na-awu akpata oyi ma bụrụkwa nke kwesịrị nkagbu n’ụzọ ọbụla.
Ọ sịrị na ha ekwuelarị na mbụ ma na-ekwukwa ya ọzọ na ụmụ Naijiria ga-amụrụ anya na nche. Ọ sịkwara na-agaghị agbachi nkịtị ka ogbugbu ana-egbu ndi mmadụ n’ụdia na-aga n’ihu n’ala anyị.
Egburu ndi ụkọchukwua ka ọka dịchara nanị abalị anọ ndi nchị ehi gburu mmadụ iri na okpuru ọchịchị ime obodo Guma dịdebekwara ebe nkea mere. N’otu aka ahụkwa, otebeghịkwa aka emebiri ụlọ ruru puku atọ na Naka dị n’okpuru ochịchị ime obodo ọdịda anyanwụ Gwer, na steeti Benue. Ekwuru na mgbe nkea mere, n’ọtụtụ mmadụ merụrụ nnukwu ahụ ebe emebikwara ọtụtụ ubi nakwa osisi ndi mmadụ si na ha enweta ego.
Onye na-ahụ maka mgbasa akụkọ na Dayọsisi Katọlik nke Makurdi bụ ụkochukwu Moses Iorapuu sịrị na mgbe nkea mere, na ndi uwe ojii emeghị ntị ka ha mara n’ụdị ogbugbua na-aga n’ihu n’ime steeti Benue, malite na mgbe ndi mmadụ gisiri na ha ekweghị ịsị ka-ahapụ umụ anụmanụ ndi mmadụ ka ha kpawa nri n’ebe ọbụla masịrị ha.
Previous Post: BUHARI EKWUELA IHE EJIRI GBUE NDI ỤKỌCHUKWU NA STEETI BENUE ỤNYAHỤ
Next Post: Nollywood na INEC ejikọọla aka ịgbasa ozi maka PVC